facebook က တော်ပုကီဆိုင် Review | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » facebook က တော်ပုကီဆိုင် Review	12
facebook က တော်ပုကီဆိုင် Review
Posted by အောင် မိုးသူ on Jul 23, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 12 comments
တောပုကီ ဆိုင်ရဲ့ Review
ပထမဆုံးအနေနဲ့ သိလိုက်တဲ့အသိက ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က ပုံလှလှနဲ့ ကောင်းတယ်ဆိုတိုင်း သွားမစားမိကြစေဖို့ပဲ။ ဒီဆိုင်ကို ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က တစ်ယောက်က ကောင်းတယ် ဈေးသက်သာတယ်ဆိုပြီး ညွှန်းလို့ သွားစားဖြစ်လိုက်တယ်။
ကျတော်ကတော့ ဘယ်ဘက်မှ မလိုက်ဘဲ ပြောပါ့မယ်။
ဆိုင်ဝရောက်ရောက်ချင်း လူပြည့်နေတယ်။ သိလိုက်ပြီး ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်ကြောင့်နေမယ်။ ဝင်ဝင်ချင်း စားပွဲခုံနှစ်ခုံအကျော် အဝမှာတင် ပုဂံတွေဆေးနေတာ တောင်လိုပုံ ကြည့်မိရင် မစားချင်စရာ။
နောက်ပြီး ဆိုင်ကျဉ်းတယ် လေဝင်လေထွက်မကောင်းဘူး အိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ မှာစားဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့။ ခုပြထားတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံး စားလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေတစ်ခါတည်းမရဘူးနော် တစ်နာရီကျော်ထိုင်စောင့်လိုက်ရတယ်။ တစ်နာရီကျော်စောင့်တာတောင် အကုန်မရဘူး တစ်ခုပြီးမှတစ်ခု။
ပထမအချက် အရမ်းကြတယ်။ မီးဖိုတစ်ခုတည်း ရှိပုံရပါတယ်။ ချက်ပေးတဲ့ သူက တစ်ယောက်တည်း။
ပထမဆုံး ကြက်အရေခွံကြော် လုံးဝမကောင်ဘူး ဈေးသင့်တယ်။
မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပေမယ့် အကောင်းကြီးထဲမပါဘူး 19လမ်းထိပ်က တော့ပုကီက ပိုကောင်းဦးမယ်။ ဈေးကသင့်တယ်။ ၁၉လမ်းထိပ်က ဈေးပိုတန်တယ်။
ပုဇွန်ကိုတော်တော်ရှာလိုက်ရတယ်။ အရသာကတော့ ရွက်ကြမ်းရေကြိုပါပဲ သာမာန်အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်။
အရသာက သာမာန်အဆင့်ကိုမီရုံလောက်သာ ပဲရှိတယ်။ ပြောရင်တော့ မကောင်းဘူး။
၀က်သားတွေကို တော်တော်ဝါးယူလိုက်ရတယ်။ အရည်အရသာမဆိုးဘူး။ ဒါပေမယ့် အချိုမှုန့်များမှန်းသိသာတယ်။
မဆိုးဘူး ကောင်းတယ်။ ဈေးကြီးတယ်။ တစ်ချောင်းတစ်ထောင်။
အရသာ မဆိုးဘူး။ အကောင်းကြီးထဲမပါ။
ကြည့်ကြည့်ဦး အုန်းနို့မှုန်နဲ့ နို့ဆီဖျော်ထားတဲ့ထဲ ဂျယ်လီတွေ ကောက်ထည့်ပေးတာ။ ၁၂၀၀တဲ့ အထမ်းသည် ရွှေရင်အေးက သူ့ထက် အသာကြီးကောင်းတယ်။
ဒီဆိုင်ပို့စ်ကို တင်ထားတဲ့သူက ဈေးသက်သာတယ်တဲ့။ မဆိုးပါဘူး ပြောရမယ်။ သက်သာတဲ့အထဲမပါ ကျတော့်အတွက်တော့ တစ်နာရီကျော်စောင့်လိုက်ရပြီး စောင့်ရတာနဲ့ မတန်တဲ့ အရသာရတယ်။
ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က ညွှန်းတိုင်း ကောင်းတယ်မထင်လိုက်နဲ့နော်။
kai says: တယောက်ထဲ သွားစားလာတယ်ဆိုပါတော့..။ ဒီလောက်အများကြီး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အဖွဲ့လိုက်သွားစာတာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။
ဂျစ်စူ says: အတော်ပဲ
မစားနိုင်တာနဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
မမချွိ says: ကိုရီးယားစာဆို အသားကင်နဲ့ ဆလပ်ရွက်က လွဲရင် မမက်မောတော့ တော်သေးး
အောင် မိုးသူ says: ကျော်လည်း မကြိုက်ဘူး။
A mar nyo says: တချိူ့အစားအစာတွေကတော့ စားလို့ကောင်းပါတယ်။ပင်လယ်စာခေါက်ဆွဲ၊ ပဲငပိဟင်းရည် ၊ ရေညှိဟင်းချိူ၊
မမချွိ says: အသားကလွဲရင် ကျန်တာကို သိပ်မစားချင်တာ။
A mar nyo says: ဘယ်နားကဆိုင်ကိုသွားစားတာလဲဟင်
အောင် မိုးသူ says: တာမွေ အရိုးကုန်းလမ်းထိပ်ကပါ
A mar nyo says: တော့ပိုကီဆိုရင် ၈မိုင်က Young Na Ya ကောင်းတယ် ငါးအူလည်းမဆိုးဘူး တခြားတော့မစားဘူးသေးလုိ့မသိဘူး
မြစပဲရိုး says: မြန်မာပြည်မှာ တော်တော်စားနိုင်ကြတယ်။
ဆိုင် အသစ်ဆိုပြီး တစ်ယောက် က တစ်ယောက် ကို ညွန်းကြ၊ သွားစားဖို့ချိန်းကြ နဲ့။
sorrow says: ..ဆိုင်အသစ်တွေဆိုပြီး ဖေ့ဘွတ်ကညွန်းတယ် …စိတ်ထဲမယ်တွေးမိတာလေ…တမင်များလုပ်ကြံသလားပဲ …
ကိုယ့်ချစ်သူကအစ….အကျင့်တန်ပုံများ ..မကောင်းမကန်းအလွန်အရသာမရှိတာကို …အမှန်အတိုင်းမပြောဘူး..အင်မတန်အရသာရှိသယောင်တင်တယ်ဗျ…ကြက်သားကြော်ကို ဖက်ထဲထည့် အင်ဒိုအစားအစာဆိုပြီး…၈၀၀၀ တောင်းလားတောင်းရဲ့…. မုန့်တီကို သံပုရာရည်ဆမ်းပြီး ဗီယက်နမ်အစားအစာဆိုပြီး ..ခြောက်ထောင်တောင်းလားတောင်းရဲ့….ဆလတ်ရွက်ကို တောက်တောက်စင်း မရောနိနဲ့နယ်ပြီး salad ဆိုပြီး လေးထောင်တဲ့ခင်ဗျ….
..နောက်တခုက မာလာဟင်း… ကြိုက်တာလေးရွေးပြီးထည့်ရတာမျိုး …နှစ်သောင်းပေးခဲ့ရတယ်ခင်ဗျ ..မှိုတွေများတယ်ဆိုပြီး …
..ဖေ့ဘွတ်ကိုပွတ်..မြင်သမျှ ရီဗျူးဖတ်ပြီး မစားရရင်သေမလိုဖြစ်တဲ့သူကိုချစ်သူတော်ထားတဲ့သူတွေများတော့ ..သေတာပဲခင်ဗျ….ဒီစာကို ရင်အနာကြီးနာပြီးမန့်သည် …